အငြိမ်းစားအတွက် YouTubers ကဒေါ်လာ ၁၇၀ ပေးတဲ့ ၂၀၂၁ ကိုကြိုဆိုပါတယ် Lego Ninjago ထူးဆန်းတောက်ပသောရလဒ်များနှင့်အတူ - တစ် ဦး meme ထပ်ဖွင့်ထားကြ၏။
၏အံ့ဆဲဆဲပွဲ ဦး ထွက် 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား အပါအ ၀ င်အသစ်စက်စက်ဇာတ်ကောင်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် classic စူပါဟီးရိုး အစိမ်းရောင် Loontern။ ဒါပေမယ့် YouTuber ချစ်တယ် သူက Bugs Bunny ကိုတွေ့လိုက်သည့်အခါစိတ်ထဲအနည်းငယ်ကွဲပြားနေသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆက်မသွားခင်၊ သင့်ရဲ့ Meme ကိုငါသိ၏မှတ်စုများ၏ရင်းမြစ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Justin ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင် Big Chungus ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုသင်သိဖို့လိုလိမ့်မယ်။
အတိုချုပ်အတိုချုပ်ပြောရရင် Bugs Bunny ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ ဒါပေမယ့်သူကမုန်လာဥနီတွေများများစားစားစားခဲ့ဖူးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှက်ရစေသောယုန်ကသူ၏ပုံပန်းသဏ္agာန်ကိုချဲ့ကားပြောဆိုသည် (ဤသည်မှာ ac ဖြစ်သည်artသငျသညျယူကျု့မှာစစျဆေးနိုငျသော 1941 တိုတို, Wabbit Twouble အတွက် portly Elmer Fudd လှောင်ပြောင်ရန်, သတိရပါ, သတိရပါ) ဒီမှာ.
Chungus ဟူသောဝေါဟာရကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်သီးခြားစီတီထွင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့နှစ် ဦး သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အမည်မသိ redditor မှလက်ထပ်ခဲ့သည်။ Big Chungus ကဲ့သို့အဝလွန်သော Bugs Bunny ၏ပုံရိပ်သည် meme legend သို့ရောက်သွားသည်။
အခုကျွန်တော်တို့ memes တွေရှင်းပြတာကိုရပ်တန့်သွားမှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာအောင်ခံစားစေတယ်၊ 71030 Looney တီးလုံး ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ purist ဖန်တီးဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ် Lego Big Chungus ၏ဗားရှင်း Bugs Bunny ခေါင်းနှင့်အတူ။ ထိုအကောင်း၏အကောင်းဆုံး, သင့်လျော်သောခန္ဓာကိုယ် part ရှိပြီးသား
ကံမကောင်းစွာပဲ၎င်းသည် Killow၊ Ninjago 2018 ရဲ့ 70642 Killow vs. Samurai X မှာသီးသန့်ရရှိနိုင်တဲ့လူကြမ်းဖြစ်ပါတယ် အုတ်ခဲ.
Justin အတွက်မူစျေးနှုန်းသည်အတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ သူ၌မိမိကိုယ်ကိုပြဌာန်းထားသောမူဝါဒအသစ် ရှိ၍ အသစ်ဝယ်သည့်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းကြောင့် YouTuber သည် ၇၀၆၄၂ Killow vs. Samurai X တွင်ဒေါ်လာ ၁၇၀ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ (အပေါ်စျေးအသက်သာဆုံးမိတ္တူ အုတ်ခဲ ယူအက်စ်တွင်လက်ရှိဒေါ်လာ ၁၅၅ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်၊ ထို့ကြောင့်သူမဝေးပါ။ )
နောက်ဗီဒီယိုတွင်ကစားခြင်းကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ဘာဖြစ်မည်ကိုကြည့်ပါ။ Killow ထွက်လာသည်၊ Bugs Bunny ၏ခေါင်းကဆက်သွားသည်။ Lego Big Chungus ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတွင်မည်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်ထက် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၇၀ ကိုမသုံးစွဲသောကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းသူ၏ ဦး ခေါင်းခွံနှင့်ဒူးများ၊ တက်တူးများနှင့်ရွှံ့နွံများသော biker အကျီင်္ဖြစ်သော်လည်း Killow ၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Justin ၏ခြေရာကိုလိုက်ချင်ပါက (ကံကောင်းသည် 70642 Killow vs. Samurai X ပိုင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ) သင်သည်သင်၏လက်ကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်။ Lego တနင်္လာနေ့26ပြီလ ၂၆ ရက်၊ 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား မှာစတင်သည် LEGO.com နှင့်စတိုးဆိုင်များတွင်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ ဒီမှာ.
← Humble Bundle မှတစ်ဆင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့နေစဉ် LEGO ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုသိုလှောင်ထားပါ
သတိပေးချက် - တနင်္လာနေ့တွင် LEGO အစုံအလင်ပါရှိသည် →